“बिहान उठ्न अल्छी गर्ने साथीहरुले,एकचोटी अबश्य पढ्नुहोस” - Babal Khabar
Saturday, December 4www.babalkhabar.com : For your kind information
“बिहान उठ्न अल्छी गर्ने साथीहरुले,एकचोटी अबश्य पढ्नुहोस”
October 18, 2021 by बबाल खबर
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ अर्ली टू बेड एण्ड अर्ली टू राइज, मेक्स अ म्यान हेल्दी, वेल्दी एण्ड वाइज ।
अर्थात् जो मानिस रातमा छिटै सुत्ने र बिहान सबेरै उठ्ने गर्दछन् उनीहरु स्वस्थ, बुद्धिमान तथा धनी हुन्छन् ।
बिहान सबेरै उठ्नाले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ । बिहानको समयमा मानिसको इच्छा शक्ति उच्च हुन्छ र दिन लाग्दै गएपछि यसमा कमी आउँछ ।
त्यसैले बिहानको समयमा सिर्जनात्मक सोँचाइ, समस्या समाधान जस्ता विषयमा बढि प्रभावकारी बन्दछ । त्यसैले बिहानको समयलाई बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
दिनभर कामको व्यस्तता तथा थकानको कारण हामीलाई चाँडै निद्रा लाग्छ र बिहान ढिलासम्म निद्रा खुल्दैन । बिहान ढिलासम्म सुत्नाले हाम्रो शरिर आलस्य हुनुका साथै तनाव बढ्ने हुन्छ ।
र हामी चाहेर पनि बिहान चाँडो उठ्न सक्दैनौं । त्यसैले हरेक दिन यी टिप्स अपनाउनुस्, जसले बिहान चाँडै उठ्नमा मद्दत गर्नेछ । अर्लामलाई आफुभन्दा यति धेरै टाढा राख्नुस् कि आवाज मात्र सुन्नियोस् र त्यसलाई बन्द गर्न आफै उठ्नुपरोस् । एकपटक ओछ्यानबाट उठिसकेपछि निद्रा आफै हराएर जान्छ । आफु सुत्ने कोठाको तापक्रम १८ देखि २२ डिग्री सेल्सियसकाबीच राख्नुस् ।
यसले रातको समयमा बेलाबेलामा निद्रा खुलाउछ र बिहान चाडै उठ्नमा सहयोग पुग्छ । विहानको अर्लामिङ समय ५ मिनेटको दरले कम गर्नुस् । हरेक दिन यसो गर्नाले बिहान चाँडो उठ्ने बानीको विकास हुन्छ । सुत्नुअघि विद्युतिय सामान ओछ्यानबाट टाढा राख्नुस् । राती सुत्दाखेरी मोवाइल तथा ल्यापटमसंगै राखेर तथा चलाएर ओछ्यानमा बस्नाले निद्रा हराउछ र बिहान चाँडो उठ्न सकिदैन ।
सुत्नुअघि आफैलाई प्रेरित गर्नुस् । बिहान चाडो उठ्नुछ भन्दै आफैले आफैलाई प्रेरित गर्नु्स् ।रातको समयमा प्रोटिनयुक्त तथा क्षमता भन्दा बढि खानेकुरा नखानुस् । धेरै खाना खाएमा निद्रा चाँडो आउँछ र बिहान ढिलासम्म सुत्ने हुन्छ । सुत्नुअघि चिया र कफि पिउने बानी साह्रै नराम्रो । यदि यस्तो बानी छ, भने सुत्नुअघि आजैदेखि बन्द गर्नुस् र बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुस् ।
बिहानको अर्लाम बजिसकेपछि स्नुज बटम नदबाउनुस् र अर्लाम बज्नेवित्तिकै उठ्ने बिनी बसाल्नुस् । यस्तै यो पनि भोजन ग्रहणका केही संस्कृति रहेका छन् । हातले गरिने भोजन, काँटा वा चम्चाले गरिने भोजन वा चपिस्टिकले खाइने खाना ।
नेपाल लगायत भारत वा दक्षिण एसियाली मुलुक लगायतका देशमा परापूर्व कालदेखि खाना विशेष गरि भात खाँदा पाँच औंलाको प्रयोग हुने गरेको छ ।
तर पछिल्लो चरणमा हातले खाना खान घिन मान्ने र चम्चा वा काटाको प्रयोग गर्ने नयाँ पुस्ताको संख्या बढ्दो छ ।भात मुछेर हातले खाने पुस्तामाथि नयाँ पुस्ताले खिसि टिउरी गर्ने नभएका पनि होइनन् ।
यसबाट तपाईले ला’ज मान्ने गर्नु भएको छ भने पनि पि’र नगर्नुहोस् । हातले मुछेर खाने खाना पूर्वीय संस्कृतिको हिस्सा मात्र नभएर वैज्ञानिक पनि रहेको छ ।
हात फोहर भएको अवस्थामा चम्चाको प्रयोगलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । तर हात सफा गरेर खाना खाँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । आयुर्वेदका अनुसार खाना पाँच औंलाको संगमबाट बन्ने मुद्राले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ भने पाचन प्रकृयालाई पनि यसले फाइदा गर्छ ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार हातले खाना खाँदा जुन तृप्ती मिल्दछ त्यो चम्चा वा काँटाले खाँदा मिल्दैन । आयुर्वेदका अनुसार सिधै हातले भोजनको स्वाद लिँदा त्यो बढि पौष्टिक तथा स्वास्थ्यबर्धक हुन्छ ।
भोजनहरु खिचडी, दाल र भात, हलुवा, रोटी जस्ता परिकारहरु खानुको असली आनन्द हातबाटै प्राप्त हुन्छ । हातले खाना खाँदा खानेकुरालाई मुछ्ने र हातसम्म पूराउने प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसलाई माइण्डफुट सेटिङ पनि भनिन्छ । त्यसैले हातले खानु भनेको चम्चा वा काँटाले खानुभन्दा बढि लाभप्रद छ ।
माइण्डफुट इटिङका अन्य केही फाइदा पनि हुन्छन् । ती मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको यस्तो प्रकारको खुवाइले खानामा भएका पोषकतत्वहरु सरीरले सजिलैसँग लिन सक्छ ।
साथै पाचन प्रक्रियामा सन्तुलन आउने र पेटको गडबडी पनि कम हुन्छ । प्राकृतिक विज्ञानका अनुसार हातले खाना खाँदा हामीले थालमा रहेका खानेकुरालाई सही तरिकाबाट मिसाउन पाउँछौँ । यदि चम्चाले खाने हो भने त्यो काम पेटले गर्नुपर्छ ।
पेटले गर्नुपर्ने प्रारम्भिक काम हातले नै गरेपछि पाचन क्रियामा पेटमाथिको दबाब कम हुन्छ र पाचन प्रक्रिया सन्तुलित हुन्छ । क’ब्जियत, अ’पच तथा डकार आउने जस्ता समस्या कम हुन्छन् । हातले खाना खाने क्रममा पलेटी कसेर गुन्द्रीमा बसियो भने अझै लाभदायक हुने योगविज्ञानको दाबी छ ।
भोजन ग्रहणका बेला पलेटी कसेर बस्दा सुखासनको मुद्रा बन्दछ । यसबाट स्वाद ग्रन्थीहरु सक्रिय हुने र भोजन सही ढंगले पेट सम्म पुग्ने र राम्रोसँग उपापचयन हुन्छ । जब चम्चाले खाइन्छ तब हामीलाई थाहा हुँदैन की तरकारी वा खाना काँचो छ वा राम्रोसँग पाकेको छ ।
चिसो छ वा तातो छ भन्ने थाहा हुँदैन तर तर हातले खाना खाँदा हामीले यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ ।यसले खानाको प्रकार वा अवस्था अनुसारको पाचन रस उत्सर्जन गर्नका लागि हाम्रो मस्तिष्कले सम्बन्धित ग्रन्थीहरुलाई निर्देशित गर्न पाउँछ । पाचन रस सही ढंगले उत्सर्जन भयो भने खानेकुरा राम्रोसँग पच्दछ र पोषक तत्वपनि सरीरले राम्रोसँग ग्रहण गर्दछ ।
त्यसबाहेक अन्य फाइदा पनि छन् – आयुर्वेदका अनुसार हातको प्रत्येक औंलामा पाँच तत्व रहेको हुन्छ । बुढी औला अन्तरिक्ष सम्बन्धि, चो’र औंला हावा सम्बन्धी, माझी औंला आगो सम्बन्धि, साइली औंला पानी र कान्छी औंला पृथ्वीसँग समबन्धित छन् ।
क’ब्जियत, अ’पच तथा डकार आउने जस्ता समस्या कम हुन्छन् । हातले खाना खाने क्रममा पलेटी कसेर गुन्द्रीमा बसियो भने अझै लाभदायक हुने योगविज्ञानको दाबी छ ।
जब तपाई हातले भोजन गर्नुहुन्छ त्यतिवेला यी सबै तत्व सक्रिय हुन्छन् । र यसले खानालाई सन्तुलित राख्न र स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । काटा र चम्चाको उपयोगले सजिलै र छिटै खान सकिन्छ होला तर यो शरीरमा रक्त प्रवाह असन्तुलित बनाउन पनि सक्छ । अन्तमा तपाईलाई मधुमेहको जोखिममा पुरयाउन पनि सक्छ ।
यूरोपीय सोसाइटी अफ एन्डोक्रिनोलोजीद्वारा प्रकाशित एक अध्ययन का अनुसार जो मानिस भोजन चाँडो चाँडो खान्छन् उनीहरुलाई दोस्रो प्रकारको मधुमेह को जो’खिम रहन्छ ।
चम्चाले खाँदा चाँडो चाँडो खाइन्छ भने हातले खाँदा केही बढी समय लाग्छ । हालते मजाले मुछेर स्वाद लिएर खाने भएका कारण पनि मधुमेहको जो’खिम कम हुन जान्छ ।विभिन्न अनलाईन बाट।
Prevपति-पत्नीको एउटै राशि छ ? यी राशिको हुन्छ उत्कृष्ट जोडी, यी राशीको खराब !
nextमन परेको मान्छेलाई फकाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् है उपायहरू